प्रधानमन्त्री ओलि भन्छन: बाँस्कोटालाई फसाइयो त्यो अडियो
हाल सामाजिक सन्जाल मा गोकुल बास्कोटाले ७० करोड को सेडिङ गरेको अडियो एकाएक भाईरल भएपछि गोकुल बास्कोटाले एकाएक राजिनामा दिएका छन । अहिले उनी पाटी भन्दा बाहिर छन भने प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई सुनियोजित रुपमा फसाइएको बताएका छन् । नेकपाद्वारा आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा भेलामा ओलीले सार्वजनिक भएको अडियोमा बोल्ने व्यक्ति स्वीस एम्बेसीले हाम्रो मान्छे होइन भनिसकेको बताए ।
बाँस्कोटाले पनि त्यसमा आफ्नो संलग्नता छैन भनिसकेको र स्वीस एम्बेसीको कुरा जोड्दै ओलीले उनको बचाउ गरेका थिए । नाम जोडेर अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै बाँस्कोटाले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएर राम्रो काम गरेको ओलीले बताए । मेरो नाममा पनि उजुरी परेको सुनेको छु । जताततै मेरो उजुरी पर्यो भनेर सामाजिक सन्जाल मा पनि आएको छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि ले आफ्नो प्रश्न गर्दे भने, ‘कत्रो उजुरी परेको छ ? त्यो उजुरीको कुनै काम छैन । भन्ने कुरा पनि सामाजिक सन्जाल सन्जाल मा बाहिरिएको छ ।
अन्य थप समाचार को लागि पनि हाम्रो साथिखबर लाई हेर्नुहोला । माथी रहएको लाईक बटम लाई किल्क गरेर छाडनुहोला । सत्य तथ्य समाचार को लागि तपाईं हाम्रो साथिखबर । समाचार कस्तो लाग्यो ? आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला ।